Iibso waxa kaliya ee aad u baahan tahay. Uma baahnid inaad iibsato dhamaan cuntooyinkaaga hal mar!
Rugta rasmiga ah ayaa daabacaya ka dib markaad dhejiso kaarkaaga oo aad geliso lambarkaaga PIN. Dib u fiiri risiitadan ka hor inta aanad dooran "haa" ee PIN-ka. Risiitadani waxay muujineysaa waxyaabaha ay ka kooban tahay WIC.
HA YEELIN isku day inaad ku qiyaasto lambarkaaga PIN. Haddii PIN-ka saxda ah oo aan la gelin isku-dayga saddexaad, koontadaada waa la xiri doonaa. Haddii ka dib laba siman, waxaa fiican inaad bedesho lambarkaaga PIN halkii aad ku xiran lahayd koontadaada.